बिरामी भर्ना नलिने सूचनामा प्रशासनको चासो, त्रास फैलाउने कार्य नगर्न अनुरोध |
बिरामी भर्ना नलिने सूचनामा प्रशासनको चासो, त्रास फैलाउने कार्य नगर्न अनुरोध
२०७८ बैशाख ३० गते, बिहीबार , ०७:४८ मा प्रकाशित
काठमाडौं। काठमाडौँ प्रशासनले कोभिड–१९ सङ्क्रमण तीव्र फैलिरहेको अवस्थामा सबै पक्ष जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ। विभिन्न अस्पतालले अक्सिजन अभावको कारण देखाई बिरामीलाई अस्पतालमा भर्ना गर्न नसकिने तथा भर्ना भएका बिरामीलाई समेत उपचार गर्न नसकिने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरिरहेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रशासनले मानवीय संवेदनशीलतामा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।
वर्तमान परिस्थितिमा सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि अस्पताल, औषधि तथा अक्सिजनको व्यवस्थापनमा सबै पक्ष क्रियाशील भइरहेको जानकारी गराउँदै अक्सिजनको अभावलाई पूर्ति गर्न सबै पक्षबाट भइरहेको प्रयासलाई नजरअन्दाज गर्दै सार्वजनिक सूचनाका नाममा सर्वसाधारण जनतामा त्रास फैलाउने कार्य नगर्न पनि प्रशासनले अनुरोध गरेको छ।
यस्ता गतिविधिले आम नागरिकमा समेत असर पर्ने हुँदा यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सबै पक्ष जिमेवार भई कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। “यस्तो अवस्थामा मानवीय संवेदनशीलतालाई बुझी आआफ्नो पक्षबाट सकारात्मक भूमिका निर्वाहका लागि समेत सार्वजनिक ध्यानाकर्षण गरिएको छ”, प्रशासन कार्यालयद्वारा बुधबार राति जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
धनगढी। कैलालीमा कोरोना सङ्क्रमितले भोग्ने स्वास्थ्य समस्याभन्दा सङ्क्रमितका परिवारले भोग्ने सामाजिक अपहेलना झन डरलाग्दो छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोनाको बेला छरछिमेकमा सद्भाव कायम राख्न आग्रह गरेको छ तर समुदायमा सङ्क्रमितका परिवारले अपहेलना भोगिरहेको गुनासो गर्न थालेका छन्।
टीकापुरको ब्लक नं ‘सी’ का एक युवक सङ्क्रमित भए। युवक सङ्क्रमित भएपछि उनको परिवारले सामाजिक अपहेलना भोगेको बताए। “बाहिर निस्कियो कि छिमेकीले नै कोरोना सार्न निस्किएको हो भन्न थाले, खाद्यान्न तरकारी पनि किन्न पाइएन, पसलेले पनि सामान दिन मानेनन्”, युवककी श्रीमतीले भनिन, “रातिको समयमा टाढाका पसलमा मुख छोपेर अत्यावश्यक सामान खरिद गरेर ल्याएँ।”
श्रीमान् बिरामी भएको पीडा हुँदाहुँदै छिमेकीले गरेको व्यवहारले थप पीडा दिएको उनले बताईन। “अपराधीलाई जस्तै व्यवहार गरे, करिब २० दिन निकै गाह्रो भयो”, उनले भनिन, “मनोबल उच्च बनाउने समयमा दुव्र्यवहार सहनुपर्दा पीडा हुनेरहेछ।”
जानकी गाउँपालिकाका ४३ वर्षीय अर्का युवक भारतमा रोजगारी गुमेपछि स्वदेश फर्किए। स्वदेश फर्केको ती दिनपछि उनलाई स्वास्थ्य समस्या शुरु भयो। उनले पिसिआर परीक्षण गर्दा नतिजा पोजिटिभ आयो। “मसँगै परिवारका अन्य सदस्यसमेत बिरामी भए। सबैलाई स्वास्थ्य समस्या शुरु भयो। सङ्क्रमित छौँ भनेपछि अरुलाई जोखिम नहोला भनेर छिमेकीलाई भन्यौँ”, युवकले भने, “म त समुदायबाटै एक्लो भएँ, मेरो घरमा छिमेकीले हेर्न पनि छोडे। अहिले हामी सबै निको भइसक्यौँ तर हाम्रो घरतिर न कोही हेर्छन्, न बोल्छन्।”
समाजमा होम आइसोलेशनमा बसेका मानिसलाई असल छिमेकीले आवश्यक खाद्यान्न, अन्य सामग्री र औषधि किनेर ल्याइदिनु पर्ने हो तर सङ्क्रमित वा सङ्क्रमणको शङ्का लागेका परिवारलाई समाजमा दुव्र्यवहार गर्न थालिएको छ। अझ बजार क्षेत्रमा कोठा भाडामा बस्नेलाई बढी कठिनाइ छ। कोठा भाडामा बस्नेहरु सङ्क्रमित भइहाले कोठा छोड्नुपर्ने डरले परीक्षणमा समेत जान सकेका छैनन्। टीकापुर १ ब्लक ‘बी’ मा स्थानीय सहकारीमा कार्यरत एक महिलाको परिवार बस्छ। श्रीमान् भारतमा रोजगारी गर्र्छन्। एक सातादेखि महिला र महिलाका दुई बच्चा बिरामी छन्। “छिमेकीले शङ्का गरेका छन् तर बिसञ्चो हुँदा पनि समस्या छैन भन्नुपरेको छ”, महिलाले भनिन, “धारा र शौचालय एउटै छ। बिरामी भए कोठा खाली गर्नु भन्लान् भन्ने डरले लुकेर औषधि गर्न गयौँ।”
सङ्क्रमण फैलिनबाट बच्नु आफैँमा बुद्धिमानी हो तर सङ्क्रमण भइहालेमा सङ्क्रमित बचाउन सबैको सहयोग आवश्यक हुन्छ। सङ्क्रमित र तिनका परिवारका लागि आवश्यक सहयोग सबै क्षेत्रबाट हुनुपर्ने समाजशास्त्री शिवचरण चौधरी बताउँछन्। “सङ्क्रमितलाई परीक्षण र उपचारका लागि अस्पतालसम्म जाने वातावरण समुदायले बनाइदिनुपर्छ। उनीहरुले आवश्यक सामानमात्र होइन, औषधि, एम्बुलेन्स आदिका लागि तड्पिनुपरेको छ”, उनी भन्छन्, “यस्तो कठिनाइ भोग्नुपर्दा उनीहरुको मनोबल कमजोर हुन्छ। मनोबल बढाउने काममा सबै सहयोगी बन्नुपर्छ। दूरी कायम गरेर सहयोग गर्दा सबैलाई सहज हुन्छ।”
टीकापुर अस्पतालका सिनियर स्टाफ नर्स तथा मनोसामाजिक परामर्शकर्ता कल्पना खड्का कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिरहेकाले यसबाट बच्नका लागि दुव्र्यवहार गर्न आवश्यक नभएको बताउँछन्। “अप्ठ्यारो तथा समस्यामा चाहिने भनेकै छिमेकी हो। छिमेकी बिरामी भएर छटपटाइरहेका बेला उसलाई आवश्यक सहयोग गर्न कञ्जुस्याईं गर्नु गलत हो”, खड्का भन्छन्, “चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले कसरी सेवा गरिरहेका छन्? उनीहरुलाई पनि त मृत्युको डर होला? चिकित्सकले यो समयमा गरेको सेवाबाट केही सिकौँ।” स्टाफ नर्स खड्का समाजमा सद्भाव बचाइराख्न अप्ठेरोमा रहेकालाई सहयोग गरे अस्पतालमा पनि बिरामीको भीड कम हुने बताउँछन्। “अस्पतालहरुमा धान्नै नसकिने भीड छ, दूरी कायम गरेर सुरक्षित तवरले एक अर्कालाई सहयोग गरौँ”, उनले भने, “यो बेला धेरै मानिस आत्तिएर मरिरहेका छन्। मानिसलाई शान्त रहन प्रोत्साहन गरौँ।”
गलकोट। बागलुङ नगरपालिका–१ निवासी ६५ वर्षीय सङ्क्रमित होम आइसोलेशनमा थिए। दश वर्षदेखि मधुमेह तथा उच्च रक्तचापको औषधि सेवन गर्दै आएकाले सङ्क्रमित भएसँगै उनी केही हतास भएका थिए। यद्यपि घरमै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा तथा मनोपरामर्श सेवा पाएपछि उनलाई कोरोना जित्न निकै सहज मात्र भएन, थप उत्साह र ऊर्जासमेत प्राप्त भयो। उनी अहिले सङ्क्रमण मुक्त भइसकेका छन्। उनी जस्तै बागलुङ बजारका छ सङ्क्रमितले घरमै स्वयंसेवी नर्सबाट निःशुल्क सेवा र परामर्श पाएका छन्।
बागलुङमा लामो समय विभिन्न स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्रियाकलापमा सक्रिय बागलुङ–१ की स्वास्थ्यकर्मी नितु खड्का अहिले होम आइसोलेशनमा बसेका सङ्क्रमितको उपचार, मनोपरामर्श तथा स्वास्थ्य सेवामा व्यस्त छन्। बिएमए नर्स रहेकी खड्काले यसअघि पनि वेलनेस नेपालका तर्फबाट नेपालमै पहिलो पटक प्राथमिक उपचार सामग्री (फस्र्टएड बक्स) प्रत्येक घरघरमा पु¥याउने अभियान चलाएकी थिईन्। उनले तीन वर्ष अघिदेखि बागलुङका विभिन्न सङ्घसंस्थासँग मिलेर विद्यालय, सवारी साधन तथा घरघरमै प्राथमिक उपचार सामग्री (फस्र्टएड बक्स) वितरण समेत गरिन।
कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि आफूले सामाजिक दायित्व बोध गरेर निःशुल्क सेवा दिँदै आएको स्वास्थ्यकर्मी खड्काले बताईन। “कोरोना महामारीमा स्वास्थ्यकर्मी भएको नाताले सङ्क्रमितको उपचारमा सहयोग गर्ने लक्ष्य लिएँ, अनि फेसबुकमार्फत अभियान चलाएँ”, खड्काले भनिन्, “यही वैशाख २१ गतेदेखि आजसम्म फेसबुकको अभियान देखेर फोन गरेका छ सङ्क्रमितको घरमै पुगेर मनोपरामर्शसहितको स्वास्थ्य उपचार गरिसकेकी छु, तीन जनाले कोरोना जित्नुभयो, तीन जना होम आइसोलेशनमै हुनुहुन्छ।”
घरमै बसेर कोरोनासँगै लड्दै गरेका जो कोहीलाई निःशुल्क सेवा दिने उनको लक्ष्य छ। उनले भौतिकरूपमा पुग्न नसक्ने स्थानका मानिसलाई समेत फोनबाट मनोपरामर्श गर्दै आएकी छन्। “अझै पनि कोरोना लाग्नासाथ अस्पताल जानुपर्छ, अक्सिजन लगाउनु पर्छ भन्ने छ। धेरै आत्तिने, मानसिकरूपमा तनाव लिने गरेको पाइयो, जटिल अवस्थामा मात्रै अस्पताल जान जरुरी छ, नत्र घरमै सङ्क्रमण मुक्त हुन सकिन्छ”, खड्काले भनिन् “सङ्क्रमितलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय, मनोपरामर्श तथा सामान्य औषधि उपचार गर्दै आएकी छु।” सङ्क्रमण हुनासाथ अक्सिजन लगाउनुपर्ने र अस्पताल पुग्नुपर्ने गलत धारणा विकसित भइरहेको र त्यसकै कारण अस्पताल भरिन थालेको उनको भनाइ छ। सङ्क्रमितको रक्तचाप र अक्सिजनको मात्रा ठीक भएमा आत्तिन आवश्यक नरहेको उनले बताईन।
यही वैशाख २१ गतेदेखि बागलुङमा निषेधाज्ञा जारी छ। जिल्लामा अधिकांश सङ्क्रमित होम आइसोलेशनमा छन्। उनीहरुलाई सामान्य औषधि र मनोपरामर्शले कोरोना जित्न सफल बनाउने खड्काको अभियान हो। उनले बागलुङबाटै भक्तपुरका एक सङ्क्रमितलाई समेत फोनबाट मनोपरामर्श दिँदै आएकी छन्। यस्तो बेलामा मनोपरामर्श औषधि उपचारभन्दा बढी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
खड्काको अभियान फेसबुकमा देखेर आवश्यक पिपिलगायत स्वास्थ्य उपकरण सहयोग समेत आएको छ। सामाजिक अभियानकर्मी पुकार बमको सहयोगमा प्राप्त पिपिइले अहिले सङ्क्रमितको घरमा पुग्न सहज भएको खड्काले बताईन। कतिपय सङ्क्रमितले आफै पिपिइको जोहो गरिदिएका छन्।
अहिले सङ्क्रमितलाई मनोपरामर्शसँगै ज्वरो, रुघाखोकी, ढाड दुखाइ, भिटामिन सीको कमीलगायतका समस्या देखिएको र सोहीअनुसार औषधि सिफारिस गर्ने गरेको उनले बताईन। खड्का वेलनेस समूह नेपालका अध्यक्ष, हाम्रो सानो प्रयास तथा रोट्र्याक्ट क्लब अफ बागलुङमा आबद्ध छन्। स्टाफ नर्स पढ्दादेखि नै सामाजिक तथा परोपकारी कार्यमा जोडिँदै आएको उनको भनाइ छ।
केही दिनअघि सुदूरपश्चिममा एक स्वास्थ्यकर्मीको निधन भएको थियो। यस्ता समाचारले पीडा दिने गरेको उनी बताउँछिन। “राज्यले स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा सुविधामा पनि ध्यान दिनुप¥यो । उपकरणहरू र नयाँ प्रविधि ल्याउनुप¥यो, राम्रो र सेवा सुविधा दिने सहुलियत शुल्कका अस्पतालहरू खोल्नुप¥यो”, उनले भनिन, “राज्यको नजरमा सधैँ पेलिँदै आएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको महत्व जनताले पनि यतिबेला बुझिदिनुपर्ने हुन्छ ।”
अघिल्लो सामाग्रीसंयुक्त सरकार बनाउने म्याद आज सकिदैं, यस्तो छ विपक्षी गठबन्धनको तयारी
पछिल्लो सामाग्रीगण्डकीमा पुनः गुरुङ्गलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नु असंवैधानिक